विज्ञहरूका अनुसार वैवाहिक जीवनभन्दा एकल जीवन उत्तम ! – SN-One of the news portal in Nepal
विज्ञहरूका अनुसार वैवाहिक जीवनभन्दा एकल जीवन उत्तम !
एजेन्सी २०७६ बैशाख ३, मंगलवार ०६:५६ मा प्रकासित
काठमाडौ । हाम्रो समाजमा महिला होस् या पुरुष एकल व्यक्ति शंकाको घेरामा हेरिन्छ । किनभने समाजका सबै मानिसहरुको सोचाईमा कुनै पनि मानिसले कसैको साथ विना एक्लै जीवन बिताउन सक्दैनन् भन्ने हुन्छ । तर अहिले एक अध्ययनले यो कुरा गलत भनेको छ ।
साइकोलोजी टुडे’मा प्रकाशन भएको अनुसन्धानको एक रिपोर्टको अनुसार वैवाहिक जीवनभन्दा एकल जीवन उत्तम हुने जनाएको छ । एकल हुनुको यस्ता छन् फाइदाहरु
१. एकल व्यक्तिहरू विवाहितभन्दा निकै लचिलो हुन्छन्
विज्ञहरुको अनुसार विवाहित महिलाहरु आफ्नो घर व्यवहारको काममा फसेर मानसिक रुपमा समस्या हुन्छन् । जसले गर्दा व्यक्तिमा भएको क्षमताहरु समेत हटेर जान्छ । तर एकल व्यक्ति स्वतन्त्र हुने भएकाले सामाजिक , आर्थिक र अन्य जस्तोसुकै काममा पनि सक्रिय हुन्छन् ।
२. एकल व्यक्तिहरू सामाजिक क्रियाकलापमा तथा शैक्षिक क्षेत्रमा बढी अग्रसर हुन्छन्
विज्ञहरुका अनुसार विवाहित व्यक्तिहरु जस्तो एकल व्यक्ति कुनै पनि घरव्यवहार , बालबच्चाको हेरचाह र अन्य झमेलामा फस्नु नपर्ने भएकाले बढी सामाजिक कार्यमा चासो राख्दछन् । त्यसपछि विस्तारै विस्तारै समाजमा एक परिचान बनाउछन् । र सबै समाजिक कार्यको नेतृत्व लिन सुरु गरी बढी सक्रिय हुन्छन् ।
३.एकल व्यक्तिको व्यक्तिगत सम्बन्ध सच्चा हुन्छ
विवाहअघि धेरै साथीसँग हिड्ने मानिसहरुले विवाहपछि साथी बिर्सन्छन् । किनभने उनीहरु आफ्नो घरपरिवार र व्यवहारमा व्यस्त हुन्छन् । तर एकल व्यक्तिसँग थोरै साथीहरु भएपनि साथी संगतले सधै रचनात्मकता र मौलिकतामा ध्यान दिन्छन् । जसलाई जीवनको सबै पक्षको ज्ञान हुन्छ ।
४. एकल व्यक्ति विवाहितभन्दा स्वतन्त्र हुन्छन्
विवाहित व्यक्तिले विवाहपछि आफ्नो परिवारको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । तर एकलले ठिक विपरित जति टाढाको यात्रा भएपनि सजिलै बाहिर निस्कन सक्छन् । त्यसैले विवाहित व्यक्तिको तुलनामा एकल व्यक्ति शारिरिक र मानसिक रुपमा बढी सक्रिय हुनछन् ।
अपरेशन थिएटरमा डाक्टरले नर्सलाई चुम्बन गरिरहेको भिडियो भाइरल
समुद्रमाथि संसारकै सानो देश
रिसाएकी पत्नीले कारको छतमा चढेर गरिन् तमाशा (भिडियो)
यी व्यक्तिले बबालसँग उडाए साइकल (भिडियो)
विश्वका १ लाख पुरुषसँग सेक्स गरेर विश्व रेकर्ड बनाउन चाहान्छिन् यि सुन्दरी